Monday, October 5, 2020 | Add a comment
Efa an-taonany izay nikarohan’ny informatisianina teto Madagasikara izay fomba ahafahana mampiditra devizy. Maro no vonona hanao asa “freelance” ary mba mety hahita kandra amin’ny internet hotsaingotsaingohana eny ihany, fa ilay fomba handraisana vola mihitsy no olana.
Ny Paypal no efa be mpampiasa any ivelany, ary maro amin’izay mety ho mpanjifa no afaka mandoa vola amin’ny alàlan’ny Paypal, saingy ny kaonty paypal sokafana eto Madagasikara dia tsy afaka mandray vola. Mitaky kaonty amin’ny banky na laharana “carte de crédit” ilay Paypal, saingy ny carte eto Madagasikara na ny kaonty eto dia tsy mety aminy.
Toa resaka lalàna hono no antony. Efa taona maromaro izay no nolazaina fa efa tokony ho voavaha io olana io, saingy hatreto dia mbola henjana vao afaka mampiditra devizy ny Malagasy.
Misy ny startup malagasy toa ny Lemurpay izay afahafana mividy carte virtuelle, saingy toa mbola ady saritaka be koa no miandry raha tiana hampidirana devizy ilay izy, ary toa hoe tsy mety ihany koa aza raha atao adiresy eto Madagasikara. Izy io koa anefa mila laharana finday handefasany SMS tsindraindray ka dia sazy mihantona ho an’izay te hampiasa io hampidirana devizy izany.
Nanomboka ny volana oktobra 2020 dia afaka ampiarahina amina carte Visa ihany koa ny Mvola. Saingy “carte de débit” ilay izy, izany hoe tsy mbola ahafahana mampiditra devizy, fa ny mamoaka ihany. Ny fisian’io tolotra an’ny Mvola io izany ankehitriny dia manome vahana ny famohan’ny firenena devizy, fa mba manasarotra kosa ny fampidirana devizy. Raha ny fahaizana sy ny talenta ananantsika Malagasy anefa, inoana fa devizy betsaka ihany no tokony ho voavily ho aty amintsika, raha eo amin’ny sehatra informatika sy taozavatra ary zavakanto fotsiny no hojerena.
Mampalahelo ahy ilay firenena amin’ny resaka “réciprocité” tsy voahaja sahala amin’izao.